Querbeet kwi Oberbergischen
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguWalter & Liana
I-Querbeet: nokuba kusegadini, kwiflethi, ehlathini okanye kwi-hike ... Yiba namava endalo e-Oberbergischen kwaye usemgaqweni welitye ukusuka kwindalo eyonwabileyo yaseCologne kunye nawo onke amathuba e-metropolis yaseCologne!
Kwindlu yethu kukho uhlobo lweflethi kamakhulu enesango elisecaleni kunye nethafa. Iqukethe igumbi lokulala (ibhedi enye okanye kabini), igumbi lokuhlala / igumbi lokulala (ibhedi ye-sofa yabantu aba-2), ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, indlu yangasese eneshawa kunye nepaseji.
Ifulethi elitofotofo neliqaqambileyo elinembono entle. Le ndlu inegumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela. Yonke into isandula ukulungiswa. Indawo entle yokonwabela umoya opholileyo, opholileyo kunye nokhululekileyo!
IBernberg sisithili sedolophu yesithili iGummersbach. Ibhasi ye-364 ikusa kumbindi wesixeko kunye nesikhululo sikaloliwe malunga nemizuzu eyi-8.
Kukho iindawo zokutyela ezinomtsalane kunye neentlobo ngeentlobo zamathuba okuthenga kumbindi wesixeko. Sikwajikelezwe ngamadama amahle kunye neendlela zokuhamba iintaba.
Malunga nemizuzu engama-40 ngemoto ukwidolophu yecathedral yaseCologne (unxibelelwano olukwanololiwe iRB25 Cologne-Meinerzhagen).
Umbuki zindwendwe ngu- Walter & Liana
UWalter & Liana yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gummersbach